Strategy First - Upcoming Classes - EBS MSc (HRM)
UK နိုင်ငံ Heriot-Watt University, Edinburgh Business School မှ MSc (HRM)
Heriot-Watt University အကြောင်း
Heriot-Watt University ကို ၁၈၂၁ တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ယူကေတွင် န၀မမြောက် သက်တမ်းအရှည်ကြာဆုံး အဆင့်မြင့်ပညာ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသည်။ Guardian 2018 Ranking အရ ယူကေ အဆင့် ၂၆ ရှိပြီး QS World's Ranking အရ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်များတွင် အဆင့် ၃၂၇ ရရှိထားပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တက်ရောက်နိုင်သော နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးမဟာဘွဲ့ များတွင် အကောင်းဆုံး၊ ဂုဏ်သိက္ခာအကြီးမားဆုံးနှင့် အသိအမှတ်ပြုခံရဆုံး တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Strategy First Institute သည် Heriot-Watt University - Edinburgh Business School ၏ Approved Learning Partner ဖြစ်ပါသည်။
MSc (HRM) တွင် သင်ကြားရမည့်ဘာသာရပ်များ
MSc (HRM) ဘွဲ့ကို ရရှိရန် လုပ်ငန်းခွင်တွင် တိုက်ရိုက်ပြန်လည်အသုံးချနိုင်မည့် HR ဘာသာရပ် (၉) ခုကို လေ့လာရမည်ဖြစ်ပြီး ဘာသာရပ်အားလုံးကို UK မှ တိုက်ရိုက် စာမေးပွဲစစ်ဆေး ဆုံးဖြတ်မည်။ ဘာသာရပ် အားလုံးအောင်မြင်မှသာ Heriot-Watt University မှ MSc (HRM) ဘွဲ့ ကို ချီးမြှင့်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။ သင်တန်းကာလမှာ ၁ နှစ်ခွဲ ကြာမြင့်မည်ဖြစ်သည်။
1. Employee Resourcing
4. Managing People in Changing Context
6. Negotiation (Elective)
7. Developing Effective Managers and Leaders (Elective)
8. Research Methods (Elective)
9. Organisational Behaviour (Elective)
MSc (HRM) သင်တန်းကြေးနှင့် ဝင်ခွင့်သတ်မှတ်ချက်
MSc Programme များအတွက် သင်တန်းကြေးမှာ USD 8200+ 4,500,000ကျပ်ဖြစ်သည်။ စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်အတွက် တစ်ဘာသာလျှင် ပေါင် (၁၆၀) ကို ထပ်မံပေးသွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
We offer two specialist MScs. Each one has been designed to maximize the career prospects of those involved in marketing and HR. Our MScs provide an in-depth understanding of key concepts and help generate solutions to real business problems.
Each course is assessed byathree-hours examination, set and graded by Edinbrugh Business School. When you feel you have mastered your subject and are ready to be rested in your knowledge, you simply pay for you exam take it. There are two exam sessions every year, in June and December at one of more than 400 locations worldwide.